Qofka Muslimka iyo sida ay guushu ku raacdo “Qiso cajiib badan” | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	4:51 pm » Magaalada Muqdisho oo 22 sano kadib lagu qabtay xuska sanad guurada ka soo wareegatay aas aaska Midowga Afrika “Daawo Sawirada” 4:28 pm » Raa’isal Wasaare Saacid oo markale si adag uga hadlay xaalada cakiran ee ka taagan Magaalada Kismaayo (Aqriso) 12:09 pm » Saraakiil ka socota Qaramada Midoobe oo maanta gaaray Magaalada Kismaayo 11:34 am » Madaxweyne Xasna Sheekh “Kaalintii aan u galnay Midowga Afrika waxay keentay, inay noo soo gurmadaan gabdho iyo wiilal Afrikaan ah” 11:20 am » Raggii ka dambeeyay dilkii Sheekh C/qaadir Gacamey oo maanta lagu xukumay xukun dil ah 9:43 am » Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Somaliya oo ku sugan Magaalada Riyadh “Daawo Sawirada” 9:31 am » Dagaal culus oo laga cabsi qabo inuu ka qarxo Magaalada Ceelbuur, markii uu gaaray Sheekh Xasan Daahir Aweys 9:23 am » Banaanbax ballaaran oo maanta markale ka dhacay Magaalada Muqdisho 8:47 am » Heshiis rasmi ah oo dhex maray Dowladaha Somaliya iyo Suudaan 6:35 pm » Wasiirkii Dastuurka oo sheegay in goor kasta ay dagaalo ka qarxi karaan Magaalada Kismaayo By: Mastar // Jul 25 2012 at 6:04 pm // 3,037 Reads // Wararka Caalamka, Wararka Somalia Qofka Muslimka iyo sida ay guushu ku raacdo “Qiso cajiib badan” Share Tweet
Nin Alle ka cabsi badan oo reer Banuu Israa’iil ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimid dad, dadkaas oo u sheegay inay jiraan beel cabudda geed oonan ka fogayn halka uu daganaa. Ninkii ayaa xanaaqay oo goostay inuu geedka jaro si aanan loo caabudin. Faash ayuu qaatay, intii uu jidka kusii jiray wayaa waxaa ka hor yimid Shaydaan, kaasoo iska soo dhigay oday quq ah. Shaydaankii ayaa ku taqigii waydiiyay halka uu socdo. Wuxuu ku jawabay inuu u socdo inuu soo gooyo ged ay caabudaan dad aanan Ilaahay (sw) caabudin. Shaydaankii ayaa yiri: “Geedkan maxaa kaa galay, maad cibaadadaada iska wadatid”? Ninkii ayaa ku jawaaabay inay goynta geedkaasi tahay cibaado nafteeda. Kadib buuq ayaa dhex maray labadoodii. Gacan qaad ayaa halkii ka dhashay, taas oo keentay in dhulka la dhigto oday shaydaanka ahaa. Kadib ayuu ninka ka korkacay odaygii shaydaanka ahaa. Kadib ayuu oday Shaydaan yiri: “Ilaahay waajib kaaga ma dhigin inaad geedka jarto, wax ajir ahna ku waayi maysid hadaadan jarin iminka. Hadii geedkan in la jaro ay tahay, Ilaahay ayaaba waajib oga dhigi lahaa Rusushii badnayd ee uu soo diray.” Hase yeeshee ninkii ayaa ku adkaystay inuu geedkaasi jaro. Dagaal ayaa dhexmaray taqigii iyo oday shaydaan. Waxaa mar labaad dhulka la dhigtay oday Shaydaan.
Markii la sii daayay ayuu oday Shaydaan yiri: “Aan heshiis noqono. Maadaamo aad faqiir tahay, maalin wlabo waxaan ku siin 3 dirham oo dahab ah. Maalin walbo waxaan kuu hoos dhigi barkintaada. Halkaas kala bax. Kadib wax ku qabso lacagtan, oo dadka baahan eed taqaanana wax kasii. Sidan ayaa dhaanto inaad geedka jarto. Hadii aad ajir heli, lacagtan adigana wax ku qabso, dadka baahanna wax ka sii. Ajir badan halkaas ayuu ku jiraaye.
” Ninkii ayaa taladii oday Shaydaan qaatay. Labo maalin ayuu helay 3dirham oo dahabka ahayd. Maalintii sedexaad ayuu waayay. Markaas intuu xanaaqay ayuu faash soo qaatay si uu u jaro geedkii. Jidka wuxuu kula kulmay odaygii (Shaydaan), markaas ayaa la waydiiday halka uu u socdo, deedna wuxuu ku jawaabay inuu rabo inuu soo jaro geedkii. Dagaal ayaa ka dhexdhacay labadoodii, waxaana dhulka la dhigtay ninkii taqiga ahaa. Wuxuu la yaabay tabar darrada ku dhacday, kadibna wuxuu oday Shaydaan waydiiyay halka uu ka keenay xooga uu dhulka ku dhigtay. Oday Shaydaan ayaa ku jawaabay: “Maalin hore xanaaqii ku haayay Ilaahay dartii ayuu ahaa, taas ayaana keentay inaad i lagdato, balse iminka xanaaqa ku hayo waa mid aduunyo iyo lacag raadis. Sidaasi darteedna ayaad ku tabar daraysatay.”
Fiiro Gaar ah: Ninkii tii Ilaahay sw oo kaliya ay wado ayaa guul hela.
Laga soo qaatay: “Ixyaa Culuumuddin” ee Imam Ghazzali
Sheeko Qosol Bdan: nin bakhiil ahaa ayaa god ku dhacay balse bakiil nimadaa ayaa gaar siisay in godkii laga saari waayo layaab Oday dhaqameed caan ahaa oo maanta lagu dilay deegaan katirsan gobolka Galgaduud Sheeko Qoaol badan oo nin soomaali ah oo kulmay swewn uu sameeyay Haweenay 10 Sano la qabay oo aan ninkeeda wax jaceyl ah ku hesay ayaa 10 sano kadin samaysay….. Ogeysiis muhiim ah: www.warqabad.com oo hada soo galay asigoo aad loo habeeyay Nin safarleey ah oo Ragga ujeediyey hadal muhiim ah markii Xaaskiisa lala isticmaali jiray muddo seddex sano ah!!! Sheekada Jimacaha iyo Shan Kiilo Cune oo Xaaskiisa isku dhaceen!!! Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments